Fahazarana 4 maha-tsara tarehy lalandava
Raha miandoha tahaka izao ny taona no mazoto sy tia mikolo endrika amam-bika, dia azo antoka fa hahavatra hanao izany foana mandavan-taona, rehefa nahita ny tombontsoa azo.
Fombafomba sy torohay mila hizarana ireto, mba hitazonana ny hamanjana mandavan-taona
Amandinina ny hoditra
Mila atao ampy rano ny vatana, mba hahazo tombony ny hoditra tazana ety ivelany sy ao anatiny. Mitaiza hoditra tsy hiroraka vetivety ny fahampian-drano. Diovina isa-maraina koa ny hoditra ary hosorana menaka manamandina sy miaro amin’ny masandro avy eo. Amin’ny alina kosa dia asiana « crème anti-âge », raha manana fahafahana, ary tonga dia matory avy eo. Raha voahaja izany dia hazava loko sady ho mandina sy malefaka mandavan-taona ny hoditra. Dieny tanora, ao anatin’ny hatsarana, no mikolo ny hoditra, mba tsy ho sahirana rehefa lehibe. 25 taona na 30 taona dia atomboka izany.
Akora tsara sy manara-penitra no ampiasaina
Rehefa hikolo vatana amin’ny akora manokana, dia aleo tsy mampiasa ireo tsy azo antoka, sao vao mainka hanimba. Ireto ny akora tsara ananana ao an-trano, na eo aza ny akora natoraly : « crème solaire » ; « crème hydratant » ; « baume » manalefaka ny molotra, ary « démaquillant ». Ireo no fototra, fa manaraka azy avy eo, arakaraky ny safidy, ny manjamaso, ny « crayon », ny « mascara »... Tsy misaraka any anaty pôketra kosa ny lokomena iray, ankoatra ireo mipetraka ao an-trano.
Ho an’ny volo
Ampy hikoloana volo ny “shampooing” sy “après-shampooing”, raha toa ka tsy te hiasa saina loatra amin’ireny akora ho an’ny volo ireny. Misy karazana akora fanasana loha tsy mitaky fampiasana menaka, saingy arakaraky ny toetoetran’ilay volo koa izany. Raha miloko ny volo, dia kendrena hifanaraka amin’izany ny akora fampiasa.
Manana toe-tsaina manaja vatana
Zava-dehibe eo amin’ny hatsarana ny toe-tsaina. Mila tsaroana foana fa fitaovana enti-mikolo ny vatana ihany ireo akora fampiasa, fa tsy izy ireo akory no fiondanana. Mahafinaritra foana ny mahita olona mihaingo sy tsara endrika, na dia tsy asongadiny aza izany. Mila foanana koa ny toe-tsaina matahotra fahanterana, satria tsy maintsy ho avy izany fotoana izany. Mila matoky tena isaky ny taona diavina, mifaly amin’ny zava-misy ary miezaka mitafy sy manaingo ny vatana amin’ny zavatra tsara. Izany hafaliana anaty izany dia miteraka hatsarana tazana ety ivelany !